ကယားပွညျနယျက စဈဘေးဒုက်ခရောကျနတေဲ့သူတှအေတှကျ တကျနိုငျသလောကျ ကူညီထောကျပံသှားမယျဆိုတဲ့ နခွေညျရှနျးလဲ့ – Cele Lover
ပရိသတျကွီးရေ ရုပျသံ ဇာတျလမျးတှဲ မြားတှငျ ပါဝငျ သရုပျဆောငျရာမှ တဈဆငျ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပျဆောငျ နခွေညျရှနျးလဲ့ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနမြေားတှငျ ပွညျသူတှဘေကျကနေ အခိုငျအမာရပျတညျပေး နသေောအနုပညာရှငျ တဈဦး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လတျတလောဖွဈရပျတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးအရေးကွီးတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို လညျး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျကနေ Speak Out လုပျပေးနတော ဖွဈပါတယျ…။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဖွဈပျေါနတေဲ့ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲမြား ဟာလညျး တဈစထကျတဈစ ပိုမိုအားကောငျးနေ ပွီပဲ ဖွဈပါ တယျ။ မနကေ့လ ညျး ကယားပွညျနယျ ရှိမွို့နယျ တဈခြို့တှငျ တဈဖကျနဲ့တဈဖကျ အပွနျအလှနျ ပဈခတျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။တဈဖကျကလညျး အပွဈမဲ့တဲ့ ပွညျသူမြားအား လကျနကျကွီးမြားဖွငျ့ နှိမျနငျး နတောဖွဈ ပါတယျ။အားလုံး ကလညျး ကယားပွညျနယျမှာ နထေိုငျကွတဲ့ ပွညျသူမြား ဘေးကငျးကွစဖေို့ဆုတောငျးပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး နခွေညျရှနျးလဲ့ ရဲ့ Facebook အကောငျ့တှငျလကျနကျပေါငျးမြားစှာဖွငျ့ ဖိနှိ ပျခံနရေတဲ့ က ယားပွညျနယျ အတှကျတတျနိုငျသလောကျ ထောကျပံ့ကူညီပေးသှားမယျ့အကွောငျး ရေးသားပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျ…။
သူ မ ကလ ညျး ” ဘဝမှာ အိမျက မပါဘဲ ကြောငျးက သူငယျခငျြး တှေ နဲ့ထှကျဖူးတဲ့ပထမဆုံး ခရီးက လှိုငျကျောမွို့လေးကိုပဲ သူငယျခငျြး ရဲ့လှိုငျကျောကအ မြိုးအိမျဆီ အလညျသှားတော့ ကလေးလေးပုစိလေးတှကေ ကိုယျ့နာမညျလေးချေါတော့ ခဈြလှနျးလို့အိမျက အဘိုးအဘှားတှကေလ ညျးသဘောကောငျးလို့ပြျောနခေဲ့ရတာအာ့အခြိနျတုနျး ကပေါ့။ကယားပွညျနယျ၊လှိုငျကျောမွို့မှာ ယနညေ့ကတညျးက အခွအေနဆေိုးရှားစှာ၊လကျနကျ ပေါငျးမြားစှာနဲ့ ဖိနှိပျခံနရေတယျ ကွားပါတယျ…။
ကြှနျမတို့ တဈနိုငျငံလုံး ကယားပွညျနယျရဲ့ စဈဘေးဒုက်ခအပျေါ Attention အပွညျ့ရှိပါတယျ။ ကယားပွညျနယျနဲ့အတူ ရှိပါ မယျ။ Supp ort နိုငျသမြှအကုနျ Support ဖို့အဆငျ့သငျ့ပါပဲ!!! #SaveMyanmar # savekayah #SaveLoikaw ” ဆို ပွီး ရေး သားထား တာ ဖွဈပါတ ယျ။ကယားပွညျနယျ အတှကျ လိုအပျတဲ့ ဆေးဝါး၊စားသောကျကုနျတို့ကို အနယျနယျအရပျရပျက ပွညျသူမြားမှ လှူဒါနျး ကွဖို့ ပွငျ ဆငျနကွေတာ ဖွဈပါ တယျ။ပွညျသူ တှေ အားလုံး ဘေးအန်တရာယျ ကငျးရှငျးပွီး အရေးတျော ပုံကွီးလညျးအမွနျ ဆုံးအောငျမွငျပါစလေို့ ဆု တောငျးပေးလိုကျရပါတယျ…။
ကယားပြည်နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် တက်နိုင်သလောက် ကူညီထောက်ပံသွားမယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ရွှန်းလဲ့
ပရိသတ်ကြီးရေ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ များတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရာမှ တစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် နေခြည်ရွှန်းလဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေများတွင် ပြည်သူတွေဘက်ကနေ အခိုင်အမာရပ်တည်ပေး နေသောအနုပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လတ်တလောဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို လည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကနေ Speak Out လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲများ ဟာလည်း တစ်စထက်တစ်စ ပိုမိုအားကောင်းနေ ပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ မနေ့ကလ ည်း ကယားပြည်နယ် ရှိမြို့နယ် တစ်ချို့တွင် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်း အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူများအား လက်နက်ကြီးများဖြင့် နှိမ်နင်း နေတာဖြစ် ပါတယ်။အားလုံး ကလည်း ကယားပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူများ ဘေးကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း နေခြည်ရွှန်းလဲ့ ရဲ့ Facebook အကောင့်တွင်လက်နက်ပေါင်းများစွာဖြင့် ဖိနှိ ပ်ခံနေရတဲ့ က ယားပြည်နယ် အတွက်တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ့်အကြောင်း ရေးသားပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
သူ မ ကလ ည်း ” ဘဝမှာ အိမ်က မပါဘဲ ကျောင်းက သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ထွက်ဖူးတဲ့ပထမဆုံး ခရီးက လွိုင်ကော်မြို့လေးကိုပဲ သူငယ်ချင်း ရဲ့လွိုင်ကော်ကအ မျိုးအိမ်ဆီ အလည်သွားတော့ ကလေးလေးပုစိလေးတွေက ကိုယ့်နာမည်လေးခေါ်တော့ ချစ်လွန်းလို့အိမ်က အဘိုးအဘွားတွေကလ ည်းသဘောကောင်းလို့ပျော်နေခဲ့ရတာအာ့အချိန်တုန်း ကပေါ့။ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့မှာ ယနေ့ညကတည်းက အခြေအနေဆိုးရွားစွာ၊လက်နက် ပေါင်းများစွာနဲ့ ဖိနှိပ်ခံနေရတယ် ကြားပါတယ်…။
ကျွန်မတို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကယားပြည်နယ်ရဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခအပေါ် Attention အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်နဲ့အတူ ရှိပါ မယ်။ Supp ort နိုင်သမျှအကုန် Support ဖို့အဆင့်သင့်ပါပဲ!!! #SaveMyanmar # savekayah #SaveLoikaw ” ဆို ပြီး ရေး သားထား တာ ဖြစ်ပါတ ယ်။ကယားပြည်နယ် အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါး၊စားသောက်ကုန်တို့ကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ပြည်သူများမှ လှူဒါန်း ကြဖို့ ပြင် ဆင်နေကြတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ပြည်သူ တွေ အားလုံး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပြီး အရေးတော် ပုံကြီးလည်းအမြန် ဆုံးအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆု တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်…။
Previous Article ဓာတျအားသုံးစှဲသူပွညျသူမြား မီတာခမြား လုံးဝမဆောငျပါနဲ့အုံး
Next Article ညီမဖွဈသူမအေးသောငျးရဲ့ တိမျး‌ရှောငျနရေတဲ့ လတျတလောအခွအေနတှေကေို ပွောပွလာတဲ့ နှငျးဝတျရညျသောငျး